यसरी पाे जन्मने रहेछन् जुम्ल्याहा बच्चा ? जानी राखौं
पाेखरा ११ साउन- हाम्रो समाजमा कति जुम्ल्याहा बच्चा जन्मेर खुसि हुन्छ भने कति दुखि भएकाे देखिन्छ । धेरै लाइ थाहा छैन होला जुम्ल्याहा बच्चा कसरि जन्मिछ भनेर आज हामी तपाइलाई जानकारी दिदैछौ ।घरमा बच्चा जन्मनु खुसीको कुरा हो । बच्चाकै कारण घरमा खुसी छाउने गर्छ । त्यो खुसी दोब्बर तब हुन्छ, जतिबेला जब घरमा एउटा हैन, दुई-दुई वटा बच्चाको आगमन एकै पटक हुन्छ । त्यो पनि ‘जुम्ल्याहा’का रूपमा । जुम्ल्याहा बच्चा कसरी जन्मन्छन् ?
कसरी बस्छ जुम्ल्याहा गर्भ, कसरी जन्मन्छ जुम्ल्याहा ?
जुम्याहा गर्भमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा : महिनावारी रोकिनासाथ महिलाले सबैभन्दा पहिले गर्भ रहेको जान्न जरुरी छ । गर्भ रहेको थाहा भएमा ६ देखि आठ हप्ताभित्रमै अनिवार्य अल्ट्रासाउण्ड गर्न जरुरी छ । यसले चारवटा फाइदा गर्छ । पहिलो गर्भ रहेको थाहा हुन्छ । त्यस्तै गर्भको साइज पत्ता लगाउन सकिन्छ । गर्भमा रहेको शिशु पाठेघरभित्र छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ भने चौथोमा गर्भ एउटा छ कि दुईटा छ भन्ने पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । एक पटकमा एकभन्दा धेरै गर्भ रहेको थाहा हुनासाथ उक्त गर्भ बढेको छ कि छैन, रक्तसञ्चार राम्ररी भएको छ कि छैनभनेर पनि पत्ता लगाउनु पर्छ ।
किनकि कैयांैपटक दुईटा गर्भ रहे पनि एउटा गर्भ अगाडि बढ्दैन । आफंै तुहिएर जान्छ । त्यस्ता गर्भपात रगतबाट पनि बाहिर निस्कन्छ भने कहिलेकाहीँ पेटभित्र आफै हराएर पनि जान्छ । जुन महिलामा दुईटा गर्भ बस्छ, उनीहरूलाई पहिलो तीन महिना धेरै वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा चक्कर लाग्ने गर्दछ । त्यसैैगरी हर्मोन सम्बन्धी परिवर्तन पनि धेरै देखिने गर्दछ तर यसबाट बच्चाको वृद्धिविकासमा भने खासै असर पर्दैन ।त्यसबाहेकको तीनदेखि छ महिनामा बच्चालाई कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे गर्नुका साथै रगत जाँच गर्नु पर्दछ ।
जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा : जुम्ल्याहा बच्चा जन्मदाँ घरमा जति खुसी छाउँछ, सामान्य प्रसूतिका क्रममा गर्भवती महिलाले त्यति नै धेरै कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । विशेषगरी सामान्य प्रसूतिद्वारा गर्भवती महिलाको प्रसूति गराउँदा उनीहरूमा रक्तश्राव धेरै हुने तथा रगतको कमी भई ज्यान समेत जानसक्ने खतरा बढी हुन्छ ।